Xanta ayaa leh in astaanta qaansoroobaad ee Apple ay soo noqon karto | Wararka IPhone
Xanta ayaa leh in astaanta qaansoroobaad ee Apple ay sameyn karto soo laabasho
Apple waligood dhinac ugama dhigin astaantan quraafaadka ah ee midabada qaanso roobeedka lagu muujiyey kiiskanna xantu waxay mar labaad ka muuqataa shabakadda iyada oo ay ikhtiyaar u yihiin qaar ka mid ah aaladaha la bilaabi doono iibinta sannadkan. Maaha markii ugu horreysay ee aan aragno tan oo kale iyo astaan ​​midabbo badan leh oo lagu daray Apple II-kii 1977 iyo Macintosh-kii sannadka 1984 ilaa 1998 waa la joojiyey.
Xaqiiqdu waxay tahay in badan oo ka mid ah dhacdooyinka ay fulisay shirkaddu aan aragno sida calaamaddan midabbada badan leh u muuqato qaar badanna waxay u maleynayaan inay dib ugu laaban karto qaar ka mid ah aaladaha, waana taas sababta ay wararka xanta ah ee ku saabsan soo laabashadeeda ay u dhalinayaan buuq weyn shabakadda. Waa inaan samirnaa oo aan aragnaa waxa dhaca markan, sax?
Astaanta ama naqshadeeda ayaa lagu arki karaa dhowr dhinac oo Apple ay qabato sida kii ugu dambeeyay Apple Park, oo leh marxalad lagu daboolay midabadan, dhowr ka mid ah alaabteeda laga soo qaatay baayac mushtarka sida funaanadaha, silsiladaha muhiimka ah ama xitaa Apple Park lafteeda meelaha qaarkood ee xayndaabka iyo dhowr ka mid ah nuxurkeeda. Laakiin tan laga bilaabo si loo helo barnaamijka 'Mac', 'iPhone' ama 'iPad' waxay u socdaan tallaabo xoogaa ka weyn.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, astaanta ayaa ku dhow inay mar kale ka soo muuqato iPhone-ka ama toos u noqo xanta taas ku sii nagaaneysa, xanta. Shaqsi ahaan waxaan u maleynayaa in Apple aysan dib ugu laaban doonin astaamaha la socda qalabkooda dhabarka waana in dareenkan uu sanadihii u dambeeyay u soo ifbaxayay calaamadda tufaaxa hadda jira iyo ku laabashada ma ahan wax hadda soo dhammaaday. Eeg, laakiin Apple waligaa ma ogaan kartid ... Ma jeclaan lahayd inaad ku aragto astaantan qalabka mar kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Xanta ayaa leh in astaanta qaansoroobaad ee Apple ay sameyn karto soo laabasho
FaceApp waa codsi kaa dhigaya nin da 'weyn oo sawir leh
Airmail waxay ku socotaa qaabka bilaashka ah iyada oo la adeegsanayo macaamiishiisuna way xanaaqsan yihiin